आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१२ फागुन २०७७ बुधबार, २४ फरवरी २०२१) « Nepali Digital Newspaper
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ००:४८
श्रीसूर्योत्तरायणे श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ शिशिर ऋतु प्रमादीनामक सम्वत्सर वि.सं. २०७७ फाल्गुन १२ गते बुधबार तद्अनुसार सन् २०२१ फरवरी २४ तारिख माघ शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र ११ः२६ पर पुष्य नक्षत्र सौभाग्य योग कौलव करण आनन्दादिमा गद योग चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः३५ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः०० बजेमा हुनेछ । प्रदोषव्रत, भीष्मद्वादशी, वटुमाघयात्रा ।
वृश्चिक – हांसविलासमा रुचि बढ्ला । कठोर परिश्रमले मनोकूलको काम बन्नेछ । वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ तर अत्यन्तै बढी प्रयास वा प्रयत्नले । विवादमा पर्नु र अरुको भरमा बस्नु उचित हुने छैन । विकासको नयाँ सम्भावना भने देखा पर्ला ।
धनु – भय भ्रम खर्च आदिमाथि नियन्त्रण बढ्ला । नियम–कानूनले साथ दिनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखा पर्ला । आशा उत्साह बढ्ला । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । धनसम्पत्ति ऐश्वर्य बढ्नेछ । हांसविलासमा आकर्षण वृद्धि हुनेछ ।
कुम्भ – कार्यमा सफलता प्राप्त होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी पनि उठ्नेछ । नयाँ कार्यमा सफलतासँगै नयाँ दायित्वको पनि प्राप्ति होला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त होला । आरोग्यता बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ ।